Microsoft Open Source na ikikere sọftụwia efu | Site na Linux
Microsoft Open Source na ikikere ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ
Taa, Microsoft na-ekwu "Linux hụrụ n'anya" ma na-eke nnukwu okwu gburugburu nke Free Software na Open Source ngwa maka obodo anyị.
Ma ọ bara uru ịjụ onwe gị, sị: Olee ụdị Ihe ngwanrọ na Open Source Ikikere iji ma ọ bụ kere Microsoft maka ngwaahịa gị na mpaghara a?
Ogologo oge, Microsoft eji maka ya proprietary (emechi) na azụmahịa na ngwaahịa, iche iche nke Ikike. Site na afọ 2001, kwuru na ụlọ ọrụ na-ebu oku site na oku ya "Ekekọrịta Isi mmalite Usoro Initiative" ntọhapụ na mbipụta dị iche iche teknụzụ na ngwa inwe ike mee ka a mara ihe ọbụghị naanị n'ihu gọọmentị, kamakwa n'ihu azụmaahịa na azụmaahịa ndị ọzọ na ndị mmadụ n'onwe ha.
Ebumnuche a bụ akụkụ nke ọtụtụ usoro iwu ọ nwere Microsoft inwe ike ikesa koodu isi nke ngwanrọ software. Na ya, kemgbe ha bidoro ruo ugbu a ha jisiri ike ịhapụ ụdị dịgasị iche iche teknụzụ na ngwa Maka uru ha na nke ndị ọzọ (mkpokọta).
Ọzọ, anyị ga-eji nkenke oge kpọtụrụ ma kọwaa, ma ndị free na-emeghe ikikere dị ka onwe ma mechibidoro, kwadoro n'okpuru atụmatụ a. Okwesiri ighota na otutu ihe eweputara n'okpuru ihe ndia ikikere na-abụkarị maka download naanị mgbe kwuru teknụzụ na ngwa ha na-emezu ntozu ntozu nke ha na-enye ha.
Ma na ịmachi ya, ị sitere na ndị na-ekwe ka naanị ya ngosipụta koodu ngosi, ọbụna na-ekwe gbanwee ma kesaa otu ihe ahụ, ma maka azụmahịa na nke na-abụghị nke azụmahịa.
1 Ikikere Microsoft
1.1 Ihe ngwanrọ na Open Source Ikikere
1.1.1 Microsoft Ọha (Microsoft Public License / MS-PL)
1.2 Akwụkwọ ikike, nke emechiri emechi na nke azụmahịa
Ihe ngwanrọ na Open Source Ikikere
Microsoft Ọha (Microsoft Public License / MS-PL)
Opekempe mmachi nke ikikere Microsoft niile.
Ọ na-enye ohere nkesa na nkesa nke koodu isi maka ma ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ nke na-abụghị nke azụmahịa.
Izizi akpọrọ Microsoft Ikike Ikike Ikike, e degharịrị aha ya rue aha ugbu a, iji kwado nnabata ya dịka Open License nke "Open Source Initiative (OSI)", nke mechara nweta na October 12, 2007 yana MS-RL.
Kwadoro dị ka ikikere ikike n'efu site na Free Software Foundation, agbanyeghị, o dakọghị na "GNU GPL".
Matakwu banyere kwuru Open License ị nwere ike ịnweta ozugbo na ndị na-esonụ njikọ.
Ikikere Microsoft (MS-RL)
Ọ na-enye ohere ikesa koodu ewepụtara, ọ bụrụhaala na faịlụ ndị nwere isi na-echekwa MS-RL.
Ọ na-enye ohere ka faịlị ndị ahụ na nkesa na-enweghị koodu nke enyere ikike izizi n'okpuru MS-RL ka enyere ya ikikere na ikike nke onye nwebisiinka.
Na mbu akpọrọ Microsoft Community License (Microsoft Community License), e degharịrị aha ya rue aha ya ugbu a, iji kwado nnabata ya dịka Open License nke "Open Source Initiative (OSI)", nke mechara nweta ya na Ọktoba 12, 2007 yana MS-PL.
A nwalekwara ya dị ka Akwụkwọ ikike efu site na Free Software Foundation. Dịka nke gara aga, ọ dakọghị na "GNU GPL".
Akwụkwọ ikike, nke emechiri emechi na nke azụmahịa
N'okpuru "Ekekọrịta Isi mmalite Usoro Initiative" E bipụtara ikikere ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime ha ka dị ike, na ndị nwere ike ịkpọ aha ikikere ndị a:
Isi Ntuziaka Microsoft (Akwụkwọ ikike Microsoft Ntuziaka / MS-RSL)
Microsoft Ikike Oha na Akaụntụ Microsoft (Microsoft Limited License / MS-LPL)
Microsoft ikikere nnweta ikikere / MS-LRL
Maka ozi ndị ọhụrụ na Ikikere Microsoft n'okpuru usoro a ị nwere ike ịga leta ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya na esta "bara uru obere post" gbasara ndị dị ugbu a «Licencias de Microsoft», ma n'ihi na ya akwụkwọ ngwa nke ya na-akpali ma na-eto eto «ecosistema libre y abierto» na ngwa ọdịnala ya «privativas, cerradas y comerciales», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Microsoft Open Source na ikikere ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ